Myagdi News - मिडियाको दबाबले मन्त्री बनेँ : डोबाटे विश्वकर्मा - Myagdi News
पोखरा । गण्डकीमा ६० सांसद छन् । संविधानले २० प्रतिशत अर्थात् बढीमा १२ जनालाई मन्त्री बनाउने छुट दिएको छ । डोबाटे विश्वकर्मालाई सोमबार मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै गण्डकीले आफ्नो कोटा पुर्‍याएको छ । यहाँ कोटा मात्रै पुगेन, मन्त्री मण्डलमा रेकर्ड कायम भयो । अघिल्लो सरकार हुँदा ७ जना मात्रै मन्त्रि थिए । एमाले नेतृत्वकै सरकारले मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्‍यायो ।
७ बाट ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो । अन्तिम समयमा फुटाइएको मन्त्रालयमा मन्त्रि पनि नियुक्त गर्न नपाउँदै सरकार ढल्यो र गठबन्धनको सरकार बन्यो ।कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमोर्चाको समर्थन छ । जसपा र माओवादी सरकारमै सहभागी छ । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ पनि मन्त्री पद सुनिश्चित गर्दै अघिल्लो सरकारको समर्थन छोडेर नयाँ गठबन्धनमा लागे । यहाँ झिनो बहुमत (३१ मात्रै) बाट सरकार बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पोखरा आउनु र तपाईं मन्त्रीमा नियुक्त हुनुमा कुनै तादम्यता छ रु कि मुख्यमन्त्रीले स्वविवेकले गर्नुभयो ?
मन्त्रालयको पनि छलफल भएको छ र रु कुन मन्त्रालयमा जाने चाहना छ ?
त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । तर, सल्लाह होला । मैले यो देउ भनेर भएन । सरकारले निर्णय गर्ने हो । प्रदेश सरकारले छिटै जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने विश्वास छ । नागरिक खबरबाट
मुगुमा बस दुर्घटना हुदाँ २३ जनाको मृत्यु